Percussion ပုတ်နည်း - Oxygen Myanmar
ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် ‘မှောက်’ ပီး
နောက်ထပ်ထိရောက်တဲ့ အရာကတော့ ‘ပုတ်’ ပေးတာပါ။ ဒါကို ဆေးပညာအရ “Percussion” လို့ခေါ်ပါတယ်
Percussion ပုတ်တာဟာ Chest Physio Techniques တွေထဲက Manual technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Airway Clearance Chest Physio Technique တွေထဲက ကိုဗစ်အတွက် လက်တွေ့မှာ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အလိုအပ်ဆုံးက Percussion နဲ့ vibration ပါ။ကိုဗစ်လူနာအများစုက ချောင်းခြောက်ဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် huffing တို့ coughing တို့ အဲ့လောက်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ချွဲသလိပ်တွေ ထွက်တာမရှိသလောက်ပါပဲ။ ချွဲပါခဲ့ရင်လည်း အခုပြောပြမယ့် ပုတ်တဲ့နည်းကို သုံးလို့ရပါတယ်။
ပုတ်ပေးရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က မောလို့ကုတင်ပေါ်မှာ မလှုပ်မရှားဘဲ နေတာကြာတာဖြစ်စေ ချွဲသလိပ်တွေထွက်အောင်ဖြစ်စေ အဆုတ်ထဲက လေအိတ်တွေအောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက်မရတော့လို့ လေအိတ်တွေကပ်ပီး အဆုတ်ရဲ့အစ်ိတ်အပိုင်းတချို့ခဲသွားတာဖြစ်စေ နမိုးနီးယားလို့ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ယောင်ရောဂါဝင်လာတာဖြစ်စေ ဒါမျိုး အခြေအနေတွေကိုကာကွယ်နိုင်အောင် “အဓိကက အဆုတ်မခဲသွားအောင် ဆရာမတို့ percussion ပုတ်တဲ့နေရာမှာ သုံးရတဲ့ လက်အနေအထားရှိပါတယ်။ လက်ဖဝါးကြီးနဲ့ လူနာကျောကို အဆုတ်ကွာအောင် တဖြန်းဖြန်း ရိုက်ပုတ်လို့မရပါဘူး
နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ Percussion ပုတ်တဲ့နေရာမှာ သုံးရမယ့်လက်အနေအထားကို အောက်ကပုံမှာပြပေးထားပါတယ်။
လက်မကိုလက်ညှိုးမှာ လာကပ်ပီး လက်ချောင်းတွေစိ လက်ဖမိုးခုံးထားတဲ့ cup hand လက်အခွက်လေးနဲ့ ပုတ်ပေးရတာပါ။
ပုတ်ရာမှာလည်း လက်တချောင်းလုံးအားလုံးသုံးပီးပုတ်တာမဟုတ်ဘဲ လက်ကောက်ဝတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို အဓိကသုံးပီး ပုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုတ်တဲ့အားကလည်း steady beat အားညီရပါမယ် ပုတ်တဲ့အသံကလည်း hollow sound ဖြစ်ရပါမယ်။ တဖြန်းဖြန်း လက်ဖဝါးနဲ့ရိုက်တဲ့အသံဆို လူနာအသားပဲ နာပီး မထိရောက်ပါဘူး။အခုပြထားတဲ့ လက်cup hand ပုံစံအမှန်ဆို လူနာအသားမနာပါဘူး။
ပုံထဲကလို လက်၂ဖက် အတက်အကျပုတ်တာကတော့ ပညာရှင်တွေလို အတွေ့အကြုံရှိမှ ပုတ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ အချင်းချင်း ပုတ်ပေးတဲ့အခါမှာ လက်တဖက်ထဲပဲ အသုံးပြုပြီး ပုတ်ပေးလည်းရပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာလည်း လူနာရှင်တွေကို ဒီလိုနည်းနဲ့ သင်ပေးခဲ့တာ သူတို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေတာကို တွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။
ပုတ်ရမယ့် လက်အနေအထား သိပီဆိုရင်လည်း လူနာကျောက်ို တိုက်ရိုက်ပုတ်လို့မရပါဘူး။ ဆရာမတို့ကတော့ PPE နဲ့ ဝင်ရတာမို့ လက်အိိတ်တွေ ၂ထပ်လောက်ဝတ်ထားတဲ့အနေအထားပါ။ အခုလို မိမိတို့အိမ်မှာ အချင်းချင်း စောင့်ရှောက်ပေးရမယ့် အနေအထားမှာ လက်အိတ်မရနိုင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဓိကက ကိုယ်ပုတ်မယ့်နေရာပေါ်မှာ သဘတ်အပါးတထည်ကို ခေါက်ပီးမှ အဲ့ သဘက်ပေါ်ကနေ ပုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
အဆုတ်ရဲ့ဘယ်နေရာတွေကို အဓိကထား ပုတ်ပေးရမလဲ?
အဆုတ်မှာ lobes တွေသူ့အပိုင်းနဲ့သူအသီးသီးရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်ပိုးဟာ အဆုတ်ရဲ့ကျောဘက်အောက်ဘက်ပိုင်းကို အဓိကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Percussion ပုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဒီအပိုင်းကို အလေးပေးပုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်အတွက် လူနာတွေရော ဆရာမတို့အတွက်ရော လက်တွေ့မှာ အသုံးဝင်ပိီး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အနေအထားတွေကိုပဲ ပြောပြပေးပါ့မယ်။
၂) ဘေးစောင်းအနေအထား နံရိုးအောက်ကျောဘက်
၃) ပက်လက်အနေအထား ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်းပါ။
ဒီလိုအနေအထားနဲ့ လူနာက မှောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ စောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်စေမှာ ပုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့ကို ၁၆နာရီစာမှောက်ဖို့ ဆရာမပထမpost မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အဆုတ်ဟာ ဘယ်ခြမ်းညာခြမ်းရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်အနေအထားတခုစီမှာ ဘယ်ညာ၂ဖက်လုံးကိုမျှပီး ၃-၅မိနစ် ပုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ထဲကိုပဲ အကြာကြီး ပုတ်နေလို့ မရပါဘူး။အစာမစားမီနဲ့ စားပီး ၁နာရီခွဲ၂နာရီကြာမှ ပုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် စားထားတာတွေ ပြန်အန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် တနေ့ ၂ကြိမ် မနက်စောစော ဖြစ်စေ ညအိပ်ခါနီးဖြစ်စေ မိမိနဲ့အဆင်ပြေသလို လုပ်စေချင်ပါတယ်။
Percussion ပုတ်မယ်ဆိုတိုင်း postural drainage နဲ့တွဲပီး physiotherapistတွေကစဉ်းစားကြပါတယ်။ Postural Drainage ဆိုတာဟာ လူနာရဲ့ ကိုယ်အနေအထားပုံစံပြောင်းပီး gravity assist နဲ့ အဆုတ်ထဲမှ ကြပ်နေခဲနေတဲ့ ချွဲအရည်များစီးဆင်းစေခြင်း က်ိုခေါ်တာပါ။ ဒါကြောင့် မိမိတို့အိမ်မှာ လူနာကိုပုတ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်း gravity ကမ္ဘာ့ဆွဲအားအထောက်အကူဖြစ်စေအောင် မှောက်ရက်နေရင် ပုံထဲကလို ကိုယ်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးခံပီး မြင့်ထားပေးတာမျိုး လုပ်ရင်း ပုတ်ပေးရင် ပိုထိရောက်ပါတယ်။
ဘယ်လို ကိုဗစ်လူနာတွေ လိုအပ်လဲ?
ကိုဗစ်ဖြစ်တိုင်း ပုတ်ပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ မှောက်အိပ်တာတောင် အောက်ဆီဂျင်ရှူနေတာတောင် SpO2တက်မလာဘဲ ကြပ်နေတဲ့သူတွေ ချောင်းဆိုးချွဲကြပ်နေတဲ့သူတွေ ဒီလိုလူနာတွေဆို ပုတ်တာ လုပ်စေချင်ပါတယ်။
Percussion ပုတ်နေတဲ့အချိန်ကော ပုတ်ပီးချိန်ကော SpO2 level Heart Rate Respiratory Rate တို့ကို pulse oximeter နဲ့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုပါတယိ။ ဒီsigns တွေမငြိမ်ဘူးဆိုရင် လုပ်နေတာကို ချက်ချင်းရပ်ပစ်ရမှာပါ။ ပုတ်နေချိန် Vital Signs ငြိမ်မှ လုပ်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
မှားပီး ယောင်လို့တောင် မပုတ်မိစေချင်တဲ့နေရာနဲ့ အခြေအနေတွေပါ
3. ရင်သား breast
6. Bony prominent အရိုးအပေါ်
7. Tumor အကျိတ်ရှိတဲ့နေရာ
ဒီလိုလူတွေဆို ပုတ် လို့ လုံးဝမရပါဘူး။
Posted in ဗဟုသုတများTagged coughing, Manual technique, Percussion